Olona nandositra tranobe taorian'ny horohoron-tany nahatratra 8.2 namely an'i Mexico - faritra Goatemalà
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Guatemala » Olona nandositra tranobe taorian'ny horohoron-tany nahatratra 8.2 namely an'i Mexico - faritra Goatemalà
Septambra 8, 2017
Ity horohoron-tany 8.2 ity dia tsapa hatrany amin'ny tanànan'ny Mexico. Ny horohoron-tany dia ambany tany amin'ny morontsirak'i Chiapas, Mexico. Ny mpizahatany dia mizaha ity havoana be tendrombohitra ity sy ala mikitroka izay tototry ny toerana arkeolojika Maya sy ny tanàna fanjanahantany Espaniola ao amin'ny tanànan'ny fanjanahantany San Cristóbal de las Casas, akaikin'ny sisintanin'i Guatemala.
Ny rafitra fampitandremana tsunami amerikana dia mampitandrina ny amin'ny tsunami mety hitranga. Mampitandrina ireo manam-pahaizana fa hisy tsunami 3 m eny amoron'ny morontsirak'i Meksika mety hamely mandritra ny 3 ora amin'ny 1.40 maraina PST.
Taorian'ny fahatairana dia tsapa ao amin'ny laharana 6.2
Nahita olona nandositra trano ny olona. Tapitra ny herinaratra any amin'ny faritra sasany amin'ny tanànan'i Mexico.
Ity horohoron-tany ity dia mety hiteraka fahavoazana, ratra ary fahavoazana lehibe.
SriLankan Airlines: toerana faha-8 manerantany amin'ny fahombiazan'ny solika fiaramanidina
Trano fandraisam-bahiny nosy amerikanina St. Thomas no tena simba: ireo mpizahatany tsy mahazo fe-potoana
Vaovao momba ny indostria fihaonana
Ny vondrom-piarahamonina ho mpiorina amin'ny fanovana ampahany amin'ny IMEX BuzzHub vaovao
9 ora lasa izay
Allegiant dia nanambara ny filoha lefitra / mpanolo-tsaina zokiolona vaovao
Ny amerikana dia manohana fanampiana vonjimaika ho an'ny indostrian'ny hotely
Air Canada dia manambara sidina vaovao Hawaii avy any Montreal, Toronto, Calgary ary Vancouver
Ny talen'ny fizahan-tany afrikana dia mahita ny famerenana ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanabeazana ho avy amin'ny fizahan-tany
Vaovao momba ny dia an-kolontsaina
Hemingway Look-Alike Contest dia miverina any Key West
Kazakhstan hijerena ny saran'ny mpandeha fiaramanidina COVID-19 alohan'ny hamelana ny fidiran'ny seranam-piaramanidina